अस्ट्रेलिया भिसामा झन् कडाइ,लागू गर्‍यो कठोर निर्णय,के छ नयाँ नियममा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले अध्यागमन विभागमा कडाइ गर्ने भएको छ। यही नोभेम्बर १८ तारिखदेखि लागू हुने गरि भिसाका लागि नयाँ नियम बनाउँदै कडाईको साथ लागू गर्न लागेको हो । नयाँ नियम अनुसार भिसाका लागि नक्कली कागजात बनाइ झुठो विवरण पेश गर्नेलाई दस वर्ष भिसा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। विद्यार्थी भिसा आवेदनमा पनि नक्कली बिवाह, नकली बैंक डकुमेन्ट, जाली कागजात पेश गर्ने जस्ता काम भएको र भ्रमण भिसामासमेत नक्कली निम्ताजस्ता झुठा कागजात भेटिने गरेको कारण यसलार्इ कडाई गर्न लाागेको हो ।
अध्यागमन नियमवालीको दफा ४ मा उल्लेख गरिएको यो कानुन अर्को सातादेखि सुरू हुन्छ। पछिल्लो नीति अनुरूप झुठो विवरण पेश गर्नेहरू एक वर्षपछि नै अर्को आवेदन दिनसक्ने प्रावधान भए पनि यस पटक कडाइका साथ दश वर्षे प्रतिबन्ध लगाइएको हो। बिभिन्न भिसा आवेदनमा थुप्रै झुठा बिवरण पेश गरेर अध्यागमन बिभागलाई छानबिनमा समेत ढिलाइ पुर्‍याएकोले कठोर निर्णय गर्नु परेको अध्यागमन बिभागले जनाएको छ।
किन हुन्छ भिसा आवेदन ‘रिजेक्ट ?
१) अधुरो विवरणः
भिसा आवदेन अस्वीकृत हुने प्रमुख कारण आवेदन दिदा बुझाइने विवरण अपुग वा अधुरो हुनु हो । त्यसैले भिसा आवेदन दिदा दिइने जवाफलाई सपोर्ट गर्ने खालका कागजात बुझाउँनुपर्दछ । जस्तो तपाईलाई अरु कुनै नामले पनि चिनिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा तपाईले टीक लगाउँनुभएको छ भने तपाईलाई किन र कुन नामले चिनिन्छ,त्यसलाई प्रष्ट पार्ने डकुमेन्टस् बुझाउँन आवश्यक छ । त्यसका लागि नाम परिवर्तन भएको वा दुइटै नाम भएको व्यक्ति एकै हुन् भनी प्रमाणित गर्ने कागजात आवश्यक पर्दछ । झुटा र गलत विवरण यदि तपाईले बुझाउँनुभएको विवरण र कागजात मध्ये कुनै एउटा मात्र झुटो वा गलत पाइयो भने मान्नुस् तपाईको आवदेन सीधै अस्वीकृत भयो । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सधैंका लागि अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न नपाउँने गरी कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना समेत बढी रहन्छ । साथै कुनै कुनै केसमा त त्यसरी गलत विवरण बुझाउँनेका विरुद्ध दुतावासले ठगी मुद्दा समेत चलाउँन सक्छ ।
२) आर्थिक सर्पोट प्रमाणित नहुनु :
विशेष गरी विद्यार्थी र पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिनेहरुले आफ्नो आर्थिक हैसियत र सपोर्ट पुष्टि हुने सही कागजात बुझाउँन अनिवार्य छ । तपाईले बुझाउँनुभएको कागजातले पुष्टि गर्ने तपाईको आर्थिक स्थितिमा अष्ट्रेलियाली सरकार सन्तुष्ट र विश्वस्त हुन आवश्यक छ ।
३) गलत पेशा :
तपाईले आफ्नो क्षेत्र वा पेशा भन्दा बाहिर गएर भिसा आवेदन माग्नुभयो भने पनि अस्वीकृत हुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले आफ्नो पेशा वा क्षेत्रसँग मेल खाने भिसाका लागि मात्र आवेदन दिनु बढी बुद्दिमता ठहरिन्छ ।
४) साथी वा परिवारका लागि पर्यटन भिसामा आवदेन दिनु :
पर्यटक र आफ्नो परिवार अथवा साथी भिन्न भिन्न कुरा हुन् । तर धेरै जसोले आफ्नो साथीलाई भेट्न जाँदा होस् या परिवार मिलनका लागि होस् पर्यटन भिसामा आवेदन दिन्छन् । यसो गर्दा पनि भिसा अस्वीकृत हुने सम्भावना बढी रहन्छ । किनभने पर्यटक भिसा भनेको विशुद्ध अष्ट्रेलियाको भ्रमण गर्न चाहनेहरुका लागि दिइने भिसा हो ।
५) स्वस्थ्यताको सही प्रमाणपत्र नहुनु : हरेक काम गर्नका लागि स्वस्थ्य हुन अति आश्यक छ । त्यसैले भिसाका लागि आवेदन दिनेले आफ्नो स्वस्थ्यताको सही प्रमाणपत्र बुझाउँनुपर्दछ । अष्ट्रेलियाको भिसाका लागि आवेदन दिनेले एचआइभी एड्स,क्षयरोग र पोलियो लगायतका रोगहरुबाट मुक्त भएको प्रमाणपत्र बुझाउँनुपर्दछ ।
६) अँग्रेजीमा दक्षता प्रमाणित नगर्नु : अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र स्थायी रुपमा बस्न चहनेले आफू अँग्रेजीमा दक्ष भएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्दछ । त्यसैले आइएलटीएस,टोफेल लगायतका भाषागत दक्षता पुष्टि गर्ने परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र बुझाउँन आवश्यक छ । कहिलेकाहीं आवेदकको स्थलगत परीक्षा पनि दिन सक्छन् । त्यसैले अँग्रेजीमा दक्षता प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा पनि भिसा आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।
७) प्रोफेशनल सहयोग नलिनु : हरेक कामका लागि विज्ञ र दक्षहरुको सहयोग आवश्यक पर्दछ । त्यसैले तपाई अष्ट्रेलियाका लागि भिसा आवेदन दिदै हुनुहुन्छ भने विज्ञहरुको अवश्य परामर्श लिनुहोला । विशेष गरी अष्ट्रेलियाको कानूनी र सामाजिक विषयका ज्ञाता,भिसाका प्रकार र आवश्यक कागजातहरुका बारेमा पूर्ण रुपमा ज्ञान र अनुभव भएकाहरुको परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ । कहिलेकाहीं आफै आफैं जान्ने छु भन्ने गल्तीले पनि भिसा आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।
7,541 total views, 22 views today
भदौं ३०,काठमाडौं । नेपालबाट अष्ट्रेलियामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरु एक्लै बस्ने र यहाँको भिन्दै वातावरणमा […]